Kunyatsotarisa hupenyu hunotyisa PBS mushandi kubva kuDen Kolder: Martin Vrijland
Kunyatsotsvaka kutsvaga kwehupenyu hwePBS mushandi kubva kuDen Kolder
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 5 June 2019	• 20 Comments
Tarisira mberi kune izvi zvinotyisa zvakapukunyuka PBS-er (unyanzvi hwevanhu vanoita saboteur) kubva kumucheto muDen Kolder. Ndapota cherechedzai nguva ino kwete kunyanya zvakadaro! Panguva ino hapana PsyOp (kushanda kwepfungwa) kusundira nemitemo mitsva.
Zvechokwadi izvi ndizvo zvakakanganisika naMark Rutte uye furazi itsva TBS yakapukunyuka kubva kuchipatara yaMichael P. muDen Dolder, asi zvinogona kunge zvakajeka kuti unogona kuita sei munhu asiripo kuburikidza nekombiki-swap software. Mufananidzo uyu wep profile wakanditora 10 maminetsi emabasa (via iyi website) uye ini ndinokurudzira kuti uverenge chinyorwa chiri pasi apa nekunyatsoona kuti nzira dzakadaro dzinogona kushandiswa sei kutamba nemasoka ezvinyorwa zvenhema.
Iye zvino panewo purogiramu pamusika inokubvumira kuti upe hurukuro yakararama kubva kumaseri webcam (kana mumugwagwa, kuburikidza negreencreen) paPC yakawanda uye kuisa zvose chiso uye inzwi reumwe pamusoro paro. Izvi zvinoitwa munguva chaiye uye pasina kukanganisa. Unogona kuona izvi pasi (famba uchiwedzera pasi pevhidhiyo).
Nyaya yaAnn Faber naMichael P. saka inononoka seawa iri mumhepo uye inoratidzika kuti nyaya yacho yakave yakarongeka pamwero mukuru nekubatsirana kwehutongi, vezvematongerwe enyika uye vezvematongerwo enyika kuti vaite chete mutemo mutsva haimbozogamuchirwi nevanhu. Nokutamba vanhu zvikuru pamanzwiro, vanhu vazhinji vanogutsikana kuti vari kufarira kuchinja kwakadaro kwemutemo, nokuti munhu wose anoubatanidza nemhuka Michael P.
Vhidhiyo vakatitsigira kuti zvose zvaizova zvechokwadi, asi hatizombokwanisi kuzviongorora isu uye tinofanira kufunga kuti hatisi kutamba neHollywood techniques. Chigumisiro ndechokuti vanhu vanogona kubviswa pfungwa dzepfungwa pasina chikonzero uye vanogona kuparara mumhosva yavo yese upenyu hwavo, nokuti mutemo hauna kuvadzivirira zvakare. (Verenga pano the sequel)
Source chinyorwa listings: faceswaponline.com, telegraaf.nl
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp iye zvino aishandiswawo kudai zvinyorwa zvemakambani kune gweta?
Anja Schaap asati atsigirwa a PsyOp? Ona pano nei (video)
The Thijs H. PsyOp yaifanira kukanganisa nyanzvi yehupfumi uye iyo yakatove yakagadzirirwa nhasi
Tags: Anne, ari, madder, Faber, Featured, kliniki, klinkiek, Michael, nhau dzakaipa, vakapukunyuka, vakapukunyuka, P., Pan imba, tbs, tbser
Ndizvo zvakafanana Dekker anoedza kubvisa rubatsiro rwemitemo, naizvozvo changamire akagamuchira mirairo yake .. beefehl ist befehl. Pakutanga ndakafunga kuti Tom van 't Hek's brother crazy watiza 😉
Mufananidzo wacho wakandiyeuchidza zvikurukuru waLeo Blokhuis. Zvichida vaiishandisa semuenzaniso wekudzika?
Maziso akandiyeuchidza Tom van 't Hek ... kutanga kufemerwa.
Iko shoko rakakosha zvikuru, nokuti rinoratidza kuti vari kuzogadzirira murairo umo munhu wese achangochengetwa mukati. Nokudaro kubviswa kwegadziriro yezororo.
Goelag is gulag uye iwe unongoda kugara mairi kwehupenyu hwako hwose sewakaramba.
..or iig a BN'er nekuti iyo inotaura zvisinganzwisisiki zvechokwadi. Iwe unotarisira kuti vangazopedza nguva shomanana vachigadzirira kunzwisisika kwakadzama kune anonyanya kufunga 😀
.. ikozvino ndinofunga kunyanya zvakanyanya pamusoro pekufananidza ne Brech, ndebvu, tsvuku, etc. = NLP anchors
@Akaita kunzwisisa zvaunoreva, kutsvakurudza nokukurumidza neGoogle pane jos b kunoratidza rudzi rwemigumisiro. Yekupedzisira yaJ Jos B yakadhindwa maawa 8 apfuura kune zviteshi zvemiterevhizheni zvakadai se RTL, SBS. Ichi chifananidzo maawa 8 akare uye inzvimbo yeTalpa Networks (De Mol)
Ivo, ivo varume vanobva mune script, havasi kuzoedza kuita kuti spyop inetseke. Pakutanga Vane simba. Ndiani angatora paHen? Vose pane zvese zvakakosha. Mukuwedzera, vanoziva kuti kuderera kweq yevoruzhinji neNeanderlander chii. Vaya vanozviita vakachenjera vanochengeta muromo wavo wakavhara nokuti ivo pachavo vari chikamu cheClub muNeanderland iyo inosarudza zvose.
Zvinongova pachena muhupfeko hwechiso chenyu uye kuburikidza neAnchor / tamputi iyo Shanduro yeSpyop / yemitambo inouya kubva ku 'hurumende', kufunga kukuru kweNeanderlander kwapfuura. Kana iwe ikozvino unoitawo mapurogiramu! Iko brainwash inoita kuti vatauriri vevakomana vabve muScript, ivo havabhadharwi pasina, avo vane chiso chavo vanopararira vanoparidza zvisina maturo zvino kutsoropodza kufunga ndiyo subliminal yakapfuura. Asi kunyange kana muNeanderland achibuda kubva kumeso ake uye anofunga kuti chimwe chinhu chakaipa pano. Zvaari kuenda kuti aite, anogona kuita uye paanoziva kuti achadzoka zvakare muhana yake. Usiku hwakanaka, varanda. Vakomana vacho vanyori vari kuseka shure kwezviitiko.
hahaha uye zvino kamwe kamwe bhara pamberi pemeso ake, iwe unorevei?
Kana iwe uine uchapupu hwokuti Sinterklaas haipo, saka vana vachiri kuda kutenda kuti inongovapo, nokuti ndiyo ndiyo iyo inofanira kuva uye iwe haufaniri kupindira, iyo ipati, siya vana chete.
Zvechokwadi vagari havadi psychopaths nehupombwe mumugwagwa, asi ikozvino vamwe vagari vauya pasi pechitendero chimwe.
Kutaura kwekare: Kuenzanisa maapuro ane mapeari.
Kuguma kweshoko rekusununguka munyaya ino kubva kuTelgraaf uko pavanokanda kubwinya kwevaNazi pasi pechitendero chimwe.
Unyanzvi hwakaipa kwazvo hwekudzivisa rusununguko rwokutaura nekutsvakurudza.
Havazobvisi zvifananidzo zveNazi nemapapaganda. Vanowanzova ndivo vanoparadzira uye vanogovera ruzivo urwu. Pakupedzisira, ivo vanongoda boogeyman. Danidzira wolf.
Zvichida vakashandira musikana akanaka panguva ino ...
Zviri pachena kuti ndeupi mutemo mutsva unoda kuiswa.
Hanzvadzi inoda hupenyu hwehama, asi inogara ichimushanyira mumakiriniki. "Iwe unotarisa kutendeseka, ndinoti ichocho chikanganiso chakakura chaunogona kuita" ndicho chinonyanya kukosha chekuita izvi. Musuo waamai inofanira kuvharwa, nokuti hama inoda kumukuvadza. Asi isu tinovashanyira kwevhiki nevhiki (nokuti kana iye achangowana mushonga wake iye akanaka).
Kubva pamuchina we19, Jeren Pauw anotiratidza mapurogiramu avanova nawo muhofisi yekunyora .. hapana chinetso kuti munhu aonekwe akwegura.
Hapana chinetso chekuisa pamwe zvakadzika-chiso mukoma wechiso (actress) hanzvadzi zvichida?
Anotarisa saRutte! Vakashandisa maziso aRutte! Kunongoratidza kuti vanoziva kuti anotambudzika! Teregi inodonha! Tichazofanirawo kutarisana nemamiriro ekunze (kutyisa) mutemo!
Wakaverenga here zvandakanyora? Ndakaita chinyorwa cheporofita sechinhu chinopera. Ingoverenga zvinyorwa zvenyaya yacho pane kungozvipindura kumifananidzo.
hasbarra trolls havaverengi, ivo vanongoda kutumira nyaya dzekukurukurirana. Zvichida iberi ine zvimwe shoebat zvinhu zvinotengeswa 😀
Shamba yemufananidzo ndeyeDe Mol neshamwari, zororo rose rakasanganiswa kunze.
Nemafaro vane Petro M .. Iko kuponeswa kweNeanderland. Kurara zvakanaka zvakare kusvikira kune imwe inotungamirirwa kuenda. Iyo nyika, varanda vanotenda zvose baba vanotaura.
« Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp iye zvino aishandiswawo kudai zvinyorwa zvemakambani kumagweta?
Peter M. (kubva munin'ina uyu akatendeka kuna Jeroen Pauw) akasungwa zvakare »
Total Visits: 14.463.177
SandinG op Ziva iyo nhoroondo kuti unzwisise iyo UN Age 2030
SalmonInClick op Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa
Camera 2 op Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa